musha Europe MotoGP Vatasvi Marc Marquez Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeSpanish motokari racer nomutambo wezita “Svosve reCervera". Our Marc Marquez Childhood Story plus Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvikira zuva.
Marc Marquez Yemwana Nhau- Iyo Ongororo.
Hongu, munhu wose anoziva kubva pakukwanisa kwake kutora ngoro yakanyanyisa kusvika kune yakanyanyisa kana iri kufamba makona. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nhoroondo yaMarc Marquez iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Marc Márquez Alentà akazvarwa musi we 17th waFebruary 1993 kuCervera muCatalonia, Spain. Akanga ari wekutanga kuvana vaviri vakazvarwa naamai vake, Roser Alenta uye kuna baba vake, Julia Marquez.
Marc Marquez Vabereki Julia naRosal.
Nyika yeSpain yerudzi ruchena nemidzi yeCatalan yakamutswa kwaakaberekerwa muCervera kwaakakurira pamwe chete nemunin'ina - Alex uyo waanenge akura makore matatu.
Kukura paCavera, vechidiki Marc vakanga vachida kukwidzika vakakomba motokari. Akapedza paucheche hwake kupinda misangano pamwe nababa vake nababamunini, avo vose vakashanda sevadzidzi vanozvipira zvekwidzi yepamusasa yekambani inonzi Moto Club Segre. Amai vake vakazvipirawo muchikwata nekugadzira sandwiches.
Pakazosvika nguva yekumhanya bhasikoro prodigy aive akura 4, akakumbira kuti vabereki vake vamutorere mudhudhudhu. Vabereki vaMarc vakasungirwa nemufaro kuchishuwo chake nekumutorera bhasikoro diki rakagadzirwa nezvimudziviriri kumudzivirira kuti asadonhe kana achiichovha.
Marc Marquez akatasva bhasikoro rake rekutanga semwana ane makore mana.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Marc akanga akwegura 5 paakazivisa chido chake chekudzidzira motokari. Zvisinei, kukura mumuviri uye kuyerwa kwaive kunonoka kwemufambisi wemutambo, kunyanya panguva yechikoro chake chekutanga. Mamiriro acho akanga ari pedyo nedambudziko rakakura iro vabereki vake vaifanira kugadzira michero kunomubatsira kuti akure.
Izvo ipapo mwana muduku anongoratidza zviratidzo zvekubata nevezera rake mumazuva ekutanga edzidzo yake yechikoro chesekondari. Kunyangwe zvakadaro, varongeri vezviitiko zvekupfeka zvisina kukwana vakawana nzira dzekugadzirira kushaya simba kwake nekubatanidza kilograms yekutungamirira bhasikoro rake kuitira kuti zviite kuti zvikwanise kutevedzera mitemo.
VERENGA Joan Mir Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Marc Marquez akangotanga kukura nekukurumidza mukati memazuva ekutanga edzidzo yake yechikoro chesekondari.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Nhoroondo yekutamba kukuru kwaMarc mukukwikwidza bhasikoro kwakadzokera kunopera ma1990s apo iye we5-6-gore-okuberekwa akakwikwidza muSpanish Enduro Race yevechidiki vane 500cc bhasikoro. Akaenderera mberi achikwikwidza maCatalan Motocross uye Enduro Championship mu1999.
Zvimwe zviitiko zvemujaho zvakaonekwa Marc akapedzisira ari mumhanyi muCatalan Motocross Championship yakaitwa mu2000. Muna 2001, akazova mutsigiri wenyaya uye akazopedzisa chechitatu mu 2002 Catalan Speed ​​Championship.
Marc Marquez akakunda 1st nzvimbo panguva yeCatalan Motocross Championship mu2001. Chikwereti: Timetoast.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
2004 ndiyo gore iro Marc rakasimudzirwa kuC125cc muchikoro panguva yechiCatalan Speed ​​Championship uye yakapedzisa wechipiri pane zvose. Kubudirira kunobudirira kwakateverwa nemakwikwi ekukunda mu2005 uye 2006 mune rimwe boka re125cc.
Marc Marquez achikwikwidza mumusangano we 125cc mu2005. Chikwereti: Timetoast.
Kunyange zvazvo mutambi wacho aigara achizviisa pasi pakukuvadzwa kunobva kune njodzi pashure pokunge atanga kutanga kwake ku 125cc 2008 Portuguese Paguru, akaedza zvose zvinopesana kuti awane mutsara wenyika ye125cc mu 2010.
Nekudaro, 2011 yakazove iri rakaomesesa gore rebasa raMarc sezvaakatora zororo refu kwazvo mushure mekurova musoro wake panguva yekuparara kuMalaysia. Kukuvara kwacho kwakakomba zvekuti Marc aifanira kuvhiyiwa maziso.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
Achienda, Marc akasaina kontrakiti yemakore maviri neRepsol Honda team muGoliGP sechinzvimbo cheCatheriney Stoner uyo akanga achirega. Akabva atamira kune rimwe boka apo chiziviso chakaitwa kuti akabvumirana kubvumirana nemashoko.
Achitsigirwa nekutsigirwa kwakakwana kwechikwata, Marc akatanga 2013 mumitambo yebhasi pamakumbo akakodzera nekukunda Shanduro yeAmerica itsva muTexas. Nekukunda, Marc akava mudiki pane vose akambosvika muGoliGP. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Marc Marquez akakunda rake rekutanga MotoGP zita muna 2013.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Marc Marquez achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo. Kutanga, Marc haazivikanwe kuti akambofambidzana chero mukadzi asati asangana nemusikana wake Lucia Riveranl Credits: El Espanol.
VERENGA Valentino Rossi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Marc Marquez nemusikana wake Lucia Rivera. Credits: El Espanol.
Kunyange zvazvo zvishoma zvichinyatsozivikanwa pamusoro pekupi kwaunosangana nemabhiri ekuratidza rudo, ivo vanoita mari vachidanana mumwe nomumwe uye hukama hwavo hahusi chakavanzika. Panguva iyi, hapana mumwe wevana vane mwana kana mwanasikana (s) kunze kwechato panguva yekunyora.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Marc Marquez anobva kumhuri yakadzika yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaMarc Marquez: Julia Marquez ndibaba vaMarc. Akashanda mukuvaka munguva yehupenyu hwaMarc achiri mudiki uye akashandawo semuzvipiri wechikwata cheMoto kwaakabatsira kurongeka kwemakwikwi emotocross Julia akashanda mukusimudzira kufarira kwaMarc mujaho wemidhudhudhu sezvo aigaro tora mucheche ipapo kuenda kumitambo yekumhanya. Ivo baba vanotsigira vane makore apfuura vakatevera Marc kutenderera pasirese, vachiona kupunzika kwake uye kukunda.
Marc Marquez nababa vake Julia.
Nezve amai vaMarc Marquez: Roser Alenta ndiamai vaMarc. Akashanda semunyori panguva yehupenyu hwaMarc achiri mudiki uye akabatsirawo kugadzirira masangweji enhengo dzeMoto kirabhu kwaakazvipira nababa vaMarc. Kuva muchengeti wematambudziko emhuri, Roser haakurumidze kukanganwa zvibairo zvakaitwa kubatsira basa raMarc. Akamborangarira kuti mhuri yaifanirwa kumira kunodya kunze kuti vatenge mabhoti emujaho waMarc, achiwedzera kuti ivo vaiwanzobatanidza zvipfeko zveganda kumasutu ake emujaho pese pavaikunda.
Marc Marquez naamai vake Roser.
Nezve hama dzaMarc Marquez: Marc haana hanzvadzi asi mukoma nomunun'una Alex uyo anogovana nyaya imwechete yehuduku naye. Vakoma vacho vakakurira pamwe nekugoverana mukufambisa motokari uye ikozvino vashandi mumutambo. Kunyange zvazvo Alex asina ruzivo rwakawanda rwakakunda saMarc, akafambira zvakanaka zvikuru ari pamwe chete naMarc akaona sevana vechikoro chechikoro chemakwikwi.
Marc Marquez nemunun'una wake Alex.
Nezve hama dzaMarc Marquez: Kure kubva kumhuri yepedyo yaMarc ana babamunini Ramon Márquez uyo zvakare ari mudhudhudhu anomhanya. Kunze kwaRamon, zvishoma zvinozivikanwa nezvevamwe vese vehukama hwaMarc kusanganisira nasekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nasekuru naambuya. Izvozvowo zvinoyambuka bhodhi kuna mainini vaMarc, vana babamunini uye vazukuru nepo babamunini vake vasina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zvehudiki hwake nguva kusvika zvino.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinokanganisa Marc Marquez? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, Marc's Persona isanganiswa yeAcarius Zodiac maitiro.
Ndiye chiito-chinotarisa, chinokwana, chakasiyana uye chinonyatsogovera ruzivo pamusoro pehupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvido zvake zvinosanganisira kuenderera mberi nemisangano yevamwe neshamwari, kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kutasva mabhasikoro.
Kutasva mabhasikoro ndeimwe yemafaro aMarc Marquez.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Marc Marquez ane mari inofungidzirwa kuti inodarika madhora $ 35 emadhora panguva yekunyora. Mhedzisiro huru yeupfumi hwake inobva kumitambo yake yekutambira uye kubvumirana kunobata apo kuongororwa kwekushandisa kwake maitiro kunoratidza kuti anorarama mararamiro anochengetedza.
Nokudaro, Marc angasarudza kutarisa basa rake rebhaja kupfuura kupupura kwepfuma yake. Somugumisiro, museumusi uyo unobata sirivha yake inokosha uye mabhasikoro inozivikanwa zvikuru kupfuura imba yake iri muguta rimwechete (Cervera). Asi zvisinei, ane motokari dzemotokari dzinosanganisira BMW M4 CS.
Marc Marquez achimira padhuze neBMW M4 CS.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Kuti tivhare marc Marquez mararamiro edu, pano pane zvisingatauriki kana zvishoma zvinyatsozivikaniswa izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwake.
Marc Marquez haana tattoos panguva yekunyora. Zvisinei, ane vateveri vanofarira vane vane tattoos pamusoro pake.
Marc akaberekwa uye akakurira muKristu. Ane nheyo dzakakwirira dzechitendero uye akamboita musangano naPapa Francis.
Mufananidzo kubva kumusangano waMarc Marquez nepapa munaGunyana 2018.
Marc Marquez haaputi panguva yekunyora, kana kunwa doro sezvo iye achingokoshesa zvinwiwa zvine simba.
Akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti "Svosve reCervera" mukati memazuva ake ehudiki nekuda kwekugona kwake kuchovha mabhasikoro aive akakura kumupfuura, kungofanana nemasvosve anotakura mitoro yakakura kudarika iwo.
Marc Marquez Urubhabhatidzo Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Marc Marquez Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yeudiki Biography Diary- yeMOTO GP Racers